Shiinaha warshad soo saare mashiinka faashad faashad iyo soosaarayaasha | Nadiifinta
Xidhiidh kasta oo ka mid ah qalabka waxaa lagu qalabeeyaa aaladda indha indheynta. Haddii uu cillad ku jiro hawsha qalliinka, dareemahu si otomaatig ah ayuu u ogaanayaa una qaylinayaa oo u joojinayaa mashiinka. Isla mar ahaantaana, isku xirka cilladda ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda shaashadda xakamaynta qalabka, taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka wax soo saarka.
Mashiinka maaskaro ee faashaddu waxay qaadataa habka alxanka ultrasonic, aalad gaarsiinaysaana waxaa lagu dhejiyaa mashiinka mashiinka. Waxyaalaha maaskaro ee nus-dhammaadka ah ayaa laga keenaa aaladda gudbinta, ka dibna faashadda waa la gooyaa ka dib markii lagu riixo giraanta ubaxyada ultrasonic, si loo soo saaro alaabooyinka la dhammeeyay. Kaliya hal qof ayaa looga baahan yahay inuu maaskarada nus-dhammaadka ah galiyo suunka xambaara mashiinka, inta hartay ee hawsha dabagalka ahna si otomaatig ah ayaa loogu dhammaystiraa.
Shaqeynta korontada 220 V
Awoodda qalabka 3000W
Hufnaanta shaqada 25-30 kiniin / min
Cabirka mashiinka 1920 (L) x 900 (W) x 1200 (H) mm
Miisaanka mashiinka 300kg
Farsamadu waxay ka samaysan tahay aluminium iyo bir bir ah, oo iftiin iyo qurux aan lahayn miridhku ku dhaco.
2. Tirinta otomaatiga ah waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa waxtarka wax soo saarka iyo horumarka.
3. Xakamaynta is-beddelka soo noqnoqda, kaas oo hagaajin kara xawaaraha socodka qalabka sida waafaqsan baahida dhabta ah.
4. Soo jiida quudinta foostada, meelaynta saxda ah ee saxda ah, waxay xakamayn kartaa ballaca alaabta ceyriinka ugu yar oo keydin kartaa kharashka.
5. Dhererka iyo cabirka alaabooyinka la dhammeeyay waa in si isku mid ah loo xakameeyaa, iyadoo la weecinayo ± 1 mm, taas oo si wax ku ool ah u xakameyn karta dhererka alaabooyinka la dhammeeyay.
6. Qalabku si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa wuxuuna u baahan yahay shuruudo hoose oo loogu talagalay hawl wadeenada, sidaa darteed waxaa kaliya loo baahan yahay in la sii daayo qalabka lana kala saaro waxyaabaha soo dhammaaday.
7. Waxqabadka xasilloon iyo hawlgal habboon.
8. Taayirka alxanka ee otomaatiga ah ee otomaatiga ah wuxuu ka samaysan yahay bir tayo sare leh oo la soo waariday, oo leh adeeg dheer iyo xirasho iska caabin ah.
Hore: Soosaaraha kaarka tilmaame qoyaan kartoo 6-dhibic kaarka huurka ilaalinta deegaanka
Xiga: Nooca Koobka, Nooca Koobka Mashiinka Maaskaro Semi-oomaatikada ah, Mashiinka maaskaro nuuca nambarka nus-tooska ah
Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Baakadaha Xumbada Baakadaha, Dharka Xumbada Cas, Soo-saaraha Maaskaro, Mashiinka Maaskaro Wejiga,